Arday ka qalinjebisay dugsiga tababarka farsamada Jowhar oo loo qeybiyay qalab kala gedisan – idalenews.com
Munaasabad lagu gudoonsiinayay shahaadooyin iyo qalab kala gedisan arday soo dhamaysatay waxbarasho muddo lix bilood ah ayaa lagu qabtay maanta dugsiga tababarka farsamada ee degmada Jowhar.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeybgalay madax ka socotay maamulka gobolka Sh/dhexe iyo kan degmada Jowhar iyadoo halkasi lagu guddoonsiiyay ardaydii ka qalinjebisey dugsiga shahaadooyin iyo qalabka farsamada.
Maamulaha dugsiga farsamada degmada Jowhar Dr Xasan Nuur Xasan oo warbixinkoobanka soo jeediyay munaasabadan ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysey ee ay arday Soomaaliyeed ay ka qalin jebiyaan dugsiga farsamada balse ay hore ugaga qalinjebiyeen boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
Dr Xasan Nuur waxa uu xusay in ay muddo lix bilood ah ay ardaydan wax ku soo baranayeen isla markaana la siin doono qalab ay ku shaqeystaan sida harqaan iyo qalabka dhismaha. Ardaydan ayaa waxa ay barteen aqoon la xiriirta farsamada gacanta,sida dharka loo tolo iyo computerka.
Guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar Maxamedamiin Cismaan Xaaji Cabdulle oo ka hadlay munaasabadan ayaa u mahad celiyay hay’adda Intersos oo gacan ka geysatay sidii ardaydan ay wax u baran lahaayeen isla markaana ay u heli lahaayeen qalab ay ku shaqeystaan.
Maxamedamiin Cismaan Xaaji Cabdulle guddoomiyaha degmada Jowhar ayaa sheegay in magaalada Jowhar ay nabad buuxda ka jirto isla markaana uu maamulku taageeri doono waxbarashada kala gedisan iyo sidii sare loogu qaadi lahaa sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa ardayda ka soo baxda dugsiyada magaalada Jowhar.